=လူထုကျန်းမာရေး(နေ့စဉ်​ဘီယာသောက်​သုံးပါက H1N1ရောဂါပိုးအား ကာကွယ်​နိုင်​​ကြောင်း Yamakar တက္ကသိုလ်​မှဒေါက်​တာShekyman မှရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိ​)=
​နေ့စဉ်​ ဘီယာ​သောက်​သုံးပါက H1N1 ​ရောဂါပိုးအား ကာကွယ်​နိုင်​​ကြောင်း
Yamakar တက္ကသိုလ်​မှ ​ဒေါက်​တာ Sheky-Man မှ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာ​နေ့က
NTM ( Naetinemue ) သတင်းဌာနကို ယခုလို​ပြောကြားလိုက်​ပါတယ်​
” ဟုတ်​ကဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့ ပုံမှန်​အားဖြင့်​ H1N1 ​ရောဂါပိုးဟာ ​လေထဲက​နေတဆင့်​
အသက်​ရှုလမ်း​ကြောင်း က​နေ ကူးဆက်​နိုင်​တာ​ပေါ့​နော်။​ အဲ့​တော့ ကျွန်​​တော်​တို့
ရှူသွင်းလိုက်​တဲ့ ​လေထဲမှာ ​ရောဂါပိုးပါဝင်​သွားလား ? မပါဝင်​သွားဘူးဆိုတာ
ဘယ်​သူမှမသိနိုင်​ဘူး ဆို​တော့ကား ကျွန်​​တော်​တို့​နေ့စဉ်​ရှူသွင်းလိုက်​တဲ့​လေကို
တက်​နိုင်​သမျှပြန်​ထုတ်​ရပါမယ်​ ။ ​လေနဲ့ပါလာတဲ့​ရောဂါပိုးကို ခန္ဓာကိုယ်​ထဲက​နေ
​လေနဲ့ပြန်​ထုတ်​တဲ့သ​ဘော​ပေါ့။ ဟုတ်​ပြီ ​လေနဲ့ဘယ်​လိုပြန်​ထုတ်​မလည်း
​ယေဘူယျအားဖြင့်​ နည်းလမ်းနှစ်​ခုရှိပါတယ်​ ။ ပထမနည်းလမ်းက ​လေလည်​ခြင်းနဲ့
ဒုတိယနည်းက လည်​ချဉ်​တက်​ခြင်း​ပေါ့​နော်​။ ပထမနည်းလမ်းဟာ ကျွန်​​တော်​တို့
လူ့ပတ်​ဝန်းကျင်​ဆက်​ဆံ​ရေးကိုထိခိုင်​နိုင်​တဲ့နည်းလမ်းပါ ။ ပတ်​ဝန်းကျင်​နဲ့
လိုက်​​လျောညီ​ထွေမှုမရှိသလို ​လေအမြဲတမ်း​လေလည်​ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး ။ အဲဒုတိယနည်းလမ်းဟာလည်း လူတစ်​​ယောက်​က ခဏခဏ​လေချဉ်​တက်​ဖို့ဆိုတာ
အဆင်​သိပ်​မ​ပြေပြန်​ဘူး။ ဒီ​တော့ကျွန်​​တော်​တို့ဟာ အ​ထောက်​အကူဖြစ်​​စေမယ့်​
အရာလိုအပ်​ပါတယ်​ ။ ဟုတ်​ကဲ့ အဲတာက​တော့ ဘီယာပါပဲ ။ ပုံမှန်​လူတစ်​​ယောက်​ဟာ
ဘီယာတစ်​ခွက်​​သောက်​သုံးရင်​ ​လေချဉ်​တစ်​ခါ (သို့) နှစ်​ခါ​လောက်​တက်​ပါတယ်​။
ပုံမှန်​​နေ့စဉ်​ ဘီယာ အနည်းဆုံး ၅ခွက်​မှ ၁၀ ခွက်​နီးပါ ညအိပ်​ခါနီး​သောက်​သုံးရင်​
တ​နေ့ကုန်​ရှူသွင်းလိုက်​တဲ့ ​လေနဲ့အတူပါလာတဲ့ H1N1လို​ရောဂါပိုးမွှား​တွေဟာ ​​လေချဉ်​တက်​ခြင်းနဲ့အတူခန္ဓာကိုယ်​ထဲက​နေပြန်​ထွက်​သွားမှာပါ… ” လို့ ​ဒေါက်​တာ Shekyman
က သူရဲ့​လေ့လာ​တွေ့ရှိချက်​ကို Muetinekwel မြို့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
​ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် …. ။ ဟုတ်​ကဲ့ ကျွန်​​တော်​က​တော့ သတင်း​ထောက်​
Aung Naing Kyaw ပါ။
( မှတ်​ချက်​ – စာ​ရေးသူ ဟာသအ​နေဖြင့်​တင်​ခြင်းသာ ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း
Credit: Augn Naing Kyaw